के तपाईलाई थाहा छ ? सुत्नु अघि के गर्ने, के नगर्ने ? - नेपालबहस
के तपाईलाई थाहा छ ? सुत्नु अघि के गर्ने, के नगर्ने ?
| १९:४१:१७ मा प्रकाशित
मंसिर ३० काठमाडौं । हामी प्राय खाना खाने वित्तिकै सुत्न जान्छौं । तर सुत्नु अघि केही कार्यहरु हामीले जीवन व्यवहारमा लागु ग¥यौं भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।
सुत्न जानु भन्दा पहिले
सुर्ती सेवन ग¥यो भने मस्तिस्कमा एक प्रकारको उत्तेजना वढाउँछ र निद्रा आउन वाधा पार्छ । सुत्न जानु भन्दा १ र२ घण्टा अगाडि यस्ता पदार्थ प्रयोग नगर्दा निद्रा आउन सक्छ । भोकै सुत्न जानु राम्रो हुदैन । पेट भोको भयो भने निद्रा लाग्दैन, सुत्नु भन्दा अगाडि धेरै पानी पियो भने पनि पिसाव लागेर उठ्नु पर्ने हुन्छ ।
नियमित शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ र निद्रा पर्न पनि सहयोगी हुन्छ तर एकदमै वढी शारीरिक व्यायाम भने गर्नु हुँदैन । लेख्ने, पढ्ने वा कम्प्युटरमा काम गरी राख्नु भएको छ भने सुत्नु भन्दा पहिले करिव आधा घण्टा जति काम गर्न छोड्नुहोस र रिल्याक्स गर्नुस् ।
सकभर निद्राको लागि औषधी प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ। औषधी प्रयोग नगरी नहुने भए एक हप्ता वा त्यो भन्दा वढीको लागि प्रयोग गर्नु हुदैन । सुत्नु भन्दा पहिले मनतातो दुध पिउदा निद्रा लाग्न मद्वत गर्छ । सकिन्छ भने सुत्नु भन्दा एक डेढ घण्टा पहिले मन तातो पानीले नुहाउदा पनि शरीर रिल्याक्स हुन्छ र निद्रा आउन सहयोग गर्छ ।
वेलुका निद्रा लागे पछि सुत्ने र विहान निद्रा खुलेपछि उठ्ने नियमित गर्नेहरुमा निदाउने र निद्रा खुल्ने साइकल वनेको हुन्छ। सधैं करिबकरिब एउटै समयमा सुत्ने र एउटै समयमा उठ्ने गर्दा निद्रामा प्राय समस्या आउँदैन। तर सधेै सुत्ने र उठ्ने समय फरक गरिरहँदा निद्रा लाग्ने र विहान जाग्ने साइकल विग्रिन्छ ।
एउटै समयमा सुत्ने भन्नाले एकदम घडी मिलाउनु भने पर्दैन, भनौ १० वजे सुत्ने प्लान छ भने आधा घण्टा अघि वा आधा घण्टा पछि हुँदा फरक पर्दैन तर कहिले १० वजे कहिले १२ वजे वा कहिले १ वजे सुत्न लाग्यो भने सुत्ने नियमितता विग्रिन्छ। धेरै मानसिक तनाव भएर वा विभिन्न रोग लागेर निद्रा नलागेको हो भने तनाव घटाउने र रोगको उपचार गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ ।
छिटो सुत्न नजाने
धेरै छिटो सुत्न गयो भने गहिरो निद्रा नपर्न सक्छ । सुत्न जाने उपयुक्त समय भनेको राती १० वजे देखि १०: ३० सम्म हो ।
निदाउनको लागि मदिरा नपिउने
रक्सी पिउने गर्दा पनि गहिरो निद्रा नपर्ने र वेला वेलामा निद्रा खुल्ने हुन्छ ।
भेषभूषामा सजिएका आमा समूह २ मिनेट पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ ६ मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द १० मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ १३ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी १५ मिनेट पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ३० मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त ३० मिनेट पहिले
राजविराज विमानस्थल दुई साताका लागि बन्द ३१ मिनेट पहिले
आज बिहानैदेखि भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड अवरुद्ध ३२ मिनेट पहिले
जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको बीचमा पर्ने रिम्ना र चाइना बगर ३४ मिनेट पहिले
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा ३७ मिनेट पहिले
बाँकेमा कोरोना बिरामीका लागि शय्या अभाव ३८ मिनेट पहिले
चितवनमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु ४७ मिनेट पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋणपत्र रजिष्ट्रारमा आरविवि मर्चेन्ट बैकिङ्ग ४९ मिनेट पहिले
नेपालगञ्जमा प्रभावकारी बन्दै बन्दाबन्दी १९ घण्टा पहिले
बैठकस्थल छोड्न नेपाल समूहलाई प्रहरीको दबाब २२ घण्टा पहिले
झोलुङ्गे पुलमा लगाइएको कर हट्यो २२ घण्टा पहिले
पत्रकारलाई कोभिडका समयमा घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउन महासंघकाे आग्रह १५ घण्टा पहिले
शेयरबजारमा निफ्रा, मेगा र एनसीसी बैंकको शेयरमा करिब १७ लाख बढी कित्ता माग, कुनको कति ? १९ घण्टा पहिले
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत वैदेशिक लगानी १८ घण्टा पहिले
आन्तरिक उडानमा हवाइ भाडा बढ्यो ३ दिन पहिले
काठमाडौंका विद्यालय एक साता बन्द ७ दिन पहिले
ब्रुमरबाट सडक सफा गरिँदै ५ दिन पहिले
तालिबानको जेलबाट २८ सर्वसाधारण मुक्त ३ दिन पहिले
अमेरिका र चीनले जलवायु परिवर्तको मुद्दामा मिलेर काम गर्ने ५ दिन पहिले
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पुल : केही सम्पन्न, केही धमाधम बन्दै ३ दिन पहिले
भौगोलिक सुन्दरतासंगै कुप्रथाले परिचित सुदूर २ दिन पहिले
मलेसियाले दियाे नेपाललाई ११० रनको लक्ष्य ४ दिन पहिले
राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा अदुवाको बिउ बितरण ३ हप्ता पहिले
लोकसंस्कृति उत्थानका लागि ठाडो भाका प्रतियोगिता २३ घण्टा पहिले
गोङ्गबु बसपार्कका टिकट काउन्टर बन्द १ हप्ता पहिले
बगाले बगेडी चरा सङ्कटापन्न अवस्थामा १ हप्ता पहिले
सेफ सन्तोषलाई नबिल बैंकको सम्मान, गृहनगरमा ई–पुस्तकालय बनाउने ४ हप्ता पहिले
पब्लिक क्याम्पस संघ तनहुँको अध्यक्षमा जितप्रकाश ३ हप्ता पहिले
निफमा तिन वटा नेपाली चलचित्रले प्रस्तिस्प्रर्धा गर्ने १ हप्ता पहिले
पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध ८ महिना पहिले
प्रजनन शिक्षा सिकाउँदै किशोरी २ वर्ष पहिले
दिगो विकास मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी परीक्षण सूची पारित १० महिना पहिले
सांसद डा. यादवका तीन ‘अपहरणकारी’को नालीबेली १२ महिना पहिले